VaMugabe Vokurudzira Runyararo Munyika
Kubvumbi 18, 2012
Mutungamiri wenyika, Va Robert Mugabe, vashoropodza nyaya yemhirizhonga munyika pamberi pesarudzo dzavanoti dzinofanirwa kuitwa gore rino mushure mereferendamu. Va Mugabe vataura izvi pamhemberero dzekusvitsa makore makumi matatu nemaviri nyika yawana kuzvitonga kuzere dzaitirwa mu Harare.
Vachitaura pamhemberero idzi, idzo dzaitirwa ku National Sports Stadium, VaMugabe vati vanhu vanofanirwa kukanganwa zvemhirizhonga yakaitika munyika uye vakaurudzira vemapato ezvematongerwo enyika kuti vatsvage rutsigiro murunyararo pamberi pesarudzo dzavanoti dzinofanirwa kuitwa gore rino.
Vati komiti yeparamende iri kutungamira hurongwa hwekunyorwa kwebumbiro idzva remitemo yenyika, yeCOPAC, inofanira kupedzisa basa rairi kuita nechimbichimbi kuitira kuti sarudzo dziitwe gore rino mushure mereferendamu.
Mashoko aVa Mugabe aya anopesana neavakambotaura ekuti sarudzo dzinogona kuitwa gore rino zvisinei nekuti bumbiro idzva remitemo yenyika rapera kunyorwa here kana kuti kwete.
Kunyange hazvo VaMugabe nebato ravo vachida kuti sarudzo dziitwe gore rino, mapoka maviri eMDC ari muhurumende yemubatanidzwa anoti sarudzo itsva dzinofanira kuitwa chete kana pachinge pazadziswa misariridzwa yose yemuchibvumirano chezvematongerwo enyika pamwe nezvakabvumiranwa muhwaro hwesarudzo.
Panyaya yenzara yakatarisana nenyika zvichitevera kusanaya kwemvura zvakanaka munzvimbo dzakawanda munyika, Va Mugabe vati hurumende inofanira kuwona zvaingaita kuti veruzhinji vasashaye chokudya.
Sezvavanowanzoita pamakungano akadai kutuka vanopikisa Zanu PF nehutungamiri hwavo, Va Mugabe havana kuita izvi uye vati rusunguko nderwemunhu wese munyika zvisinei nekuti munhu anotsigira bato ripi.
Mutungamiri wehurumende, uye vari mutungamiri rimwe boka re MDC, VaMorgan Tsvangirai, neChipiri vakati Zanu PF yave kutora rusununguko rwenyika kurwuita chiitiko chebato iri.
Semagariro avo, VaMugabe vati zvirango zvakatemerwa ivo Va Mugabe nevamwe vavo vari muZanu PF zvinofanira kubviswa. Zvisinei, VaMugabe vati hupfumi hwenyika huri kusimukira kubudikidza nenyaya dzekurima.
Vashorawo nyika dzekumavirira vachiti United Nations Security Council inofanira kuvandudzwa kuitira kuti nyika dzekumavirira idzi dzisaite zvadzinoda idzo chete panyaya dzekuda kubvisa hurumende dzinenge dzakasarudzwa nevanhu.